Shacabka degmada Yaaqshiid oo aragtidooda ka dhiibtay dib u dhiska iyo maqaamka caasimadda | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Shacabka degmada Yaaqshiid oo aragtidooda ka dhiibtay dib u dhiska iyo maqaamka...
Shacabka degmada Yaaqshiid oo aragtidooda ka dhiibtay dib u dhiska iyo maqaamka caasimadda
Shacabka degmada Yaaqshid ayaa aragtidooda ka dhiibtay Sida ay tahay in loo wajaho arrimaha Maamulka, ammiga, siyaasadda, dhaqaalaha, dhismaha waddooyinka degmadaasi iyo maqaamka Muqdisho.
Barnaamijkaan oo qeyb ka ah olalaha aragti wadaagga ee hiigsiga Caasimadda oo uu ka qeybgalay Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa bulshada degmadaasi waxa ay soo jeediyeen dhowr arrimood oo ay ka mid tahay.
Dhismaha waddooyinka degmada Yaaqshid si la mid ah degmooyinka kale, in laga gudbo nidaamka hadda ay ku yimaadaan guddoomiyaasha degmooyinka iyo gobolka loona gudbo in shacabka ay soo doortaan, in Maamulka gobolka uu raadiyo xaqa Muqdisho ay leedahay in ay matalaad ku yeelato Dowladda.
Guddoomiyaha degmada Yaaqshid Axmed Xassan Maxamuud “Geeddoow” ayaa sheegay in ay ku shaqeynayaan rabitaanka Shacabka.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed ayaa faahfaahiyay ujeedada olalaha aragti wadaagga Hiigsiga Caasimadda., isaga oo sheegay in ahmiyad ay siinayaan rabitaanka Dadka si ay ugu shaqeeyaan.
Dhan kale Waaxyaha ay ka kooban tahay degmada Yaaqshid ayaa Xassan Xuseen Maxamed u doortay Guddoomiyaha Cayaaraha degmada, kaasi oo ku soo baxay doorasho uu goobjoog ka ahaa Maamulka oo ka dhacday Xarunta degmada Yaaqshid.
Previous articleShirka Golaha Wasiirada oo lagu ansixiyey Hindise Sharciyeedka Xaqsiinta Ciidamada, loogana hadlay Doorashooyinka 2020, amniga iyo arrimo kale
Next articleKuweyt iyo Turkiga oo kala saxiixday Heshiis.